Sri Lanka: Miatrika Fitobahan’ambim-bava Avy Amin’ny Fambolena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2012 4:28 GMT
Miatrika karazana fanamby vaovao ny governemanta ao Sri-Lanka, miatrika ny fitobahan'ny ambim-bava amin'ny vary. Ny Minisitry ny Fampandrosoana ara-toekarena ao Sri Lanka, Basil Rajapaksa, dia nanolo-kevitra ny hanondrànana ireo ambim-bava amin'ny vary sy legioma ao aminy. Nisy ihany koa ireo soso-kevitra hoe atakalo solika ny vary.
Saingy inona anefa no tena zava-misy eny an-kianja? Faly amin'ny fivangongoan'ny ambim-bava ve ny tantsaha? Kely dia kely ny vaovao mikasika ny fijalian'ireo tantsaha mba hita anaty gazety. Rajaratarala, bilaogera sady tantsaha, mamaritra ilay fanondranana ny vary ho fanompàna ireo tantsaha mpamoka-bary ao Sri Lanka. Hoy ilay bilaogera manao fanamarihana:
Ao anaty lahatsoratra iray hafamitondra fanazavana ilay bilaogera momba ny fijalian'ireo mpamoka-bary ao Sri Lanka, izay tsy mahazo ny sanda sahaza ny vokatr'izy ireo:
Miezaka ny mamnoritsoritra ny fomba ifehezan'ireo mpitoto koba ny tsena sy fakàny tombontsoa amin'ilay fandraharahana i Rajaratarala ao anaty lahatsoratra iray hafa. Manolotra hevitra ilay biloagera:
Farany ilay bilaogera dia manazava ny fomba hiatrehana io ambim-bava ara-toekarena io ary miteny fa tsy mandà ny fanondrànana izy akory :